Paulo Dybala Nwa Akuko nke oma
Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Paulo Dybala Nwa Akuko nke oma
Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine
LB na-enye Full Story of a football football best known by the nickname; “La Joya” AKA The ọla. Nwa Paul Dybala Akụkọ nke a na-eme ka ị nweta akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Argentine na Juve Football Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch obere ihe ọmụma banyere nwa ọlaedo nke Argentine. Ka anyị bido.
Joao Cancelo Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Paul Dybala Nwatakiri Akuko-Nduzi na Ezin’ulo:
A mụrụ Paul Dybala dị ka Paul Bruno Exequiel Dybala na 15th November 1993 na Laguna Larga, Cordoba, Argentina site n'aka Mr. Adolfo Dybala (nna) na nwanyị Alicia de Dybala (Nne).
Ọmụmụ Dybala na ezinụlọ dị n'etiti sitere na amụma. Ee, ọ bụ nwatakịrị dị omimi onye e buru n'amụma na ọ ga-abụ ndị nrịba ama tupu ọmụmụ ya. Amụma a bụ nna ya bụ Adolfo Dybala. N'okwu ya tupu amụọ ụmụ ya nwoke atọ, ọ sịrị…
Otu n'ime ụmụ m nwoke ga-amụ otu ụbọchị na-aga otu ozi. Playgba bọọlụ ”.
A mụrụ Paulo Dybala iji mezuo amụma a. A mụrụ ya dị ka nwa ikpeazụ na nwa ụlọ. Akara Dybala ka emere ya mgbe ọ mere mkpebi igwu bọọlụ mgbe ọ dị obere.
Sunday Oliseh Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
Mgbe ọ hụrụ ọdịnihu ya, Adolfo echeghị echiche. Ọ ga-eji ego ikpeazụ ya zụta gas maka ụgbọ ala ya na ndị ọzọ iji duga ya n'ala ọzụzụ kwa ụbọchị.
Paul Dybala na nna, Adolfo Dybala.
O tinyere ego na Paulo ọ bụghị n'ihi na ọ chọrọ mmezu amụma, mana n'ihi na ọ hụrụ mkpebi ya ịme nke ọma.
Dị ka Pọl Dybala si kwuo, Enweghị ụbọchị papa m esoghị m gaa ọzụzụ.
Dịka nwatakịrị, elebara m oge egwuregwu m anya. M na-aga n'ụlọ, kpọchie onwe m n'ebe a na-asa ahụ́ ma kwaa ákwá mgbe m na-anaghị egwu egwuregwu. ”
Dybala ji nna ya ụgwọ otu ihe. Imezu amụma ya ma mee ya obi ụtọ ma hụ mkpụrụ nke ọrụ ya.
Mario Mandzukic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu
O di nwute, nke a emeghi mgbe nna ya nwuru anwu n'oge o choro ya. Ọ ka na-eru uju nna ya ka ya na ya kpa.
Ihe mgbu nke nna ya nwụrụ ugbu a bụ onye enyemaka kachasị ukwuu n'ọchịchọ ya a na-apụghị igbochi ya ibibi nnukwu otu ma bụrụ onye egwuregwu bọọlụ kachasị n'ụwa.
Papa Dybala nna, Aldofo nwere nrọ ọ na-ahụghị na-emezu n'onwe ya. Ọ bụ na Septemba 2008 ka ọrịa kansa butere ya tupu oge eruo. Paulo dị afọ 15 mgbe ahụ.
Paulo Dybala Ndụ Ezinụlọ:
Papa Dybala nna, Late Mr Adolfo Dybala nwere mgbọrọgwụ sitere na obodo Krasniow, Poland.
Ụmụaka Arturo Vidal Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Taa, a hụrụ Argentina dị ka ebe obibi nye ezinụlọ ya. Ezinụlọ ya sitere na Poland n'ihi nna nna ha, Boresaw Dybala onye a mụrụ n'akụkụ Kielce, Poland.
Ọ gbapụrụ na Poland, obodo amụrụ ya na Argentina n'oge Agha Worldwa nke Abụọ. Nke a mere mgbe ndị Nazi weghaara obodo Krasniow ya.
Ezinụlọ ezinụlọ Paulo nwekwara nne na nna Italiantali site n'aka nne nne ya, aha ya bụ Da Messa. O si na mpaghara Naples.
Daniele Rugani Childhood Story Plus Ihe Mere Uweld Biography Eziokwu
Paulo nwetara onye amaala histali na 13 August 2012. O ruru eru igwu egwuregwu bọọlụ Polish, Italian, Argentine. Paulo Dybala na nne ya bụ Alicia de Dybala dị ezigbo nso.
Dị ka okwu na-etinye ya, ọ dịtụbeghị, ọ gaghị adịkwa, ihe ọ bụla dị nnọọ ka ịhụnanya dị n'etiti nne na nwa nwoke. Nke a bụ ikpe n'etiti abụọ.
Massimiliano Allegri Nwatakịrị Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
Paulo Dybala na mama m, Alicia de.
Gustavo Dybala bụ nwanne nwoke okenye nke Paulo Dybala. Ọ gbalịrị ịgba bọlbụ mana ọ naghị eme ya.
Nwa nwanne nwoke nke Paul Dybala, Gustavo Dybala.
Ọ kwụsịrị egwuregwu ahụ n'isi mgbe ọ matara na ọ bụghị ọkpụkpọ ya. Gustavo na-achịkwa azụmaahịa ya ugbu a na Buenos Aires, Argentina.
Mariano Dybala (nke dị n'okpuru) bụ nwanne nwanne Paul Dybala. Ọ nweghị mmasị na football ma si otú a na-ezere ya site na mmalite.
Ụmụaka Alvaro Morata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa
Ọ hụrụ ịhụnanya na mgbatị ahụ. Mariano na - egwu egwuregwu ugbu a na Gymnastics na La Plata, Argentina.
Dybala na nwanne nwoke okenye ozugbo, Mariano Dybala.
Ọ bụ Paulo, obere onye mebiri ya.
Paulo Dybala Mmekọrịta Ndụ:
N'oge a na-ede Bio a, Antonella Cavalieri bụ ọmarịcha enyi nwanyị nke Paul Dybala.
Paul Dybala Love Akụkọ.
Nwoke ya nwere ike izuru ihe niile mgbukepụ n'ọhịa mana ọ bụ ya na-adọrọ uche niile. Nwaada Cavalieri nke gafere 'Anto' obere maka Antonella, biliri ama maka mmekọrịta ya na kpakpando bọl a ma ama, ebe ọ bụ na ịnweta nnukwu ihe na-esonụ na mgbasa ozi ọha mmadụ.
Antonio Conte Childhood Story Plus Na-agbagha Eziokwu Ihe Echiche
Tupu ya ebute na mgbasa ozi mgbasaozi maka mmekọrịta ya na Dybala, ọ rụrụ ọrụ dịka onye na-elekọta ụlọ oriri na ọṅụṅụ oge ụfọdụ.
Ihe mara mma nke Argentine nwere ihe karịrị 280K ndị na-eso ụzọ na Instagram naanị. Birdị ịhụnanya ahụ akpachaala anya kemgbe ọtụtụ afọ. Ha ghọrọ boenyi nwoke na enyi nwanyị na njedebe 2015.
Antonella Cavalieri nwere ogo ugbu a na azụmahịa nchịkwa si na Universidad de Palermo na Buenos Aires. A na - agọzi ya na mkpụrụ ndụ dị mma nke na - eme ka ọ bụrụ ihe nlereanya ọ bụ taa.
Dejan Kulusevski Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ihe omuma
A na-ekwu na mmekọrịta ha dị ka ọtụtụ ndị siri ike. Antonella gosipụtara afọ ole na ole na-akwado nwoke ya.
Ọ dịghị mgbe ọ na-atụ uche otu n'ime egwuregwu Dybala na ọ na-eziga ma na-ekerịta ọtụtụ photos mgbe na-ekele ya. Oge na-adịbeghị anya bụ echiche banyere ya na-eme ka ememme mgbakọ Gladiator na-akwagharị.
Akụkọ na-enweghị atụ nke Ememe Nkpuchi Dybala.
Ọ maara ihe ngosi akara ngosi ahia ya, ihe nkpuchi Dybala ozugbo mmekọrịta ha malitere. Ndi Antonella Cavalieri ga - abụ naanị Dybala? Naanị oge ga-agwa.
Paulo Dybala Biography -Cnọrọ na Rihanna:
Dybala bu kpakpando nke aka ya site na ekele ya di na nwunye di iche iche. Ọ na-abanye n'otu oge na-acha ọkụ nke Rihanna, ọ na-elekwa anya karịa obi ụtọ ịnọ naanị ya.
Paulo Dybala gosiri Rihanna ụfọdụ ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ ebe ọ nwetara nzaghachi siri ike n'aka ya. Onye egwu Argentin ahụ tinyere chi nwanyị egwu bụ Rihanna maka ụbọchị ọmụmụ ya 29th, ọ nweghịkwa ike inwe obi ụtọ ka ukwuu ịnọ ebe ahụ.
Rihanna jiri Dybala rapara nke ọma ka ọ na-ejide uwe elu ya aka, nwa nwa Argentine ahụ dị ka ọ nọ na mbara igwe nke aka ya. Naanị lelee ihu ya. Ọ na-ese n'elu ígwé ojii ọ ga-abụrịrị na ọ hụrụ ya n'anya.
Nwa nwanne Rihanna, Rorrey maara na ọ bụ onye na-akwado Juventus, ma ọ dịghị okwu ọ bụla dị na Ri-Ri's allegiances. Kedu ụzọ ọ bụla, o yiri ka Dybala anaghị echebara ya echiche.
Paulo Dybala Biography Eziokwu -Gladiator Movie Freek:
Paulo Dybala bụ onye na-ahụ ihe nkiri Gladiator n'anya, ruo n'ókè nke na ọ na-ahụ onwe ya na-ele ya anya ugboro ugboro (karịa 30 ugboro).
Ihe abụọ mere o ji kọwaa ihe mere o ji hụ fim ahụ n’anya.
Nke mbụ bụ okwu Maximus mgbe o kpughere mmadụ niile onye ọ bụ n'ezie. Okwu ndị a na-enye ndụ ya ihe dị iche.
.. Nke a na-aga dị ka ndị a; “Nne mm bụ Maximus Decimus Meridius, ọchịagha nke ndị agha nke ugwu, ọchịagha nke ndị agha Felix, ohu na-eguzosi ike n'ihe nye ezi eze ukwu, Marcus Aurelius.
Nna maka nwa nwoke e gburu egbu, di nke nwunye e gburu egbu. Aga m abọ ọbọ m, n'ụwa a ma ọ bụ nke ọzọ. ”
Paulo Dybala emeela ya ka ọ bụrụ….“Aha m bụ Paulo Bruno Exequiel Dybala, ndị La Joya (Golden Child) nke World Football, ..ngbu ọchụ nke FC Barcelona.
Nwatakịrị nwoke nke nna ya buru n'amụma na ọ ga - abụ nnukwu ndị egwuregwu. Ekwesiri m ịbụ onye egwu bọọlụ kachasị egwu na oge niile. ”
Nke abuo, ihe nkiri ahụ mere ka ọ ghọta mkpa ọ dị ịmekọrịta otu ọrụ nke ọ na-agafe na egwuregwu egwuregwu taa.
Dị ka General Maximus si kwuo na fim Gladiator, "Ihe ọ bụla si n'ọnụ ụzọ ámá ndị a pụta, anyị enweela ohere ịlanahụ ndụ ma ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ ọnụ."
Nke a bụ ihe Paulo Dybala na-agwa onwe ya na ndị otu ya mgbe ọ na-egwu egwuregwu dị oke mkpa dị ka nke FC Barcelona. Ọrụ otu dị ka ihe nkiri Gladiator gosipụtara na ihe kpatara ya ji sonye na Old Lady.
Paulo Dybala Biography - Ihe kpatara ememme nkpuchi:
Paulo Dybala egosiputawo onwe ya na ihe ngosi nke juputara n'echiche, nke bu ime nkpuchi ya na mkpịsị aka ya na ndeksi ya.
Na netwọk mmekọrịta, Dybala gwara ndị na-eso ụzọ ya mgbe ọ bụla ịchọta ihe ọ pụtara, ya na jersey dịka onyinye nye isi.
N'ikpeazụ, o weliri ihe mkpuchi a na-eme Dybala Mask n'onwe ya. Na akaụntụ Facebook ya, Paulo Dybala bipụtara vidio nke ọ na-akọwa ihe mmemme ya pụtara. Na vidiyo ahụ, o kwuru na ọ na-ezo aka na nkpuchi nke onye na-enye obi ụtọ.
Dabere na Dybala,…“Dybalamask dị mfe: ọ bụ ihe nkpuchi nke onye na-enye obi ụtọ! Mgbe anyị na-alụ ọgụ, mgbe ụfọdụ anyị ga-eyiri mkpuchi nke ndị agha anyị ka anyị wee dị ike, na-agaghị amụmụ ọnụ ọchị na obiọma anyị! ”
Paulo Dybala arụsị:
Dybala na-achọ mgbe ọ bụla ọ gụrụ Juan Juanán Riquelme. O tolitere na-ele ma na-amụta njikọta, ọhụụ, nkà na ụzụ na ikike ịme egwuregwu nke Argentine na-awakpo midfielder.
Dị ka Dybala si kwuo,
“Riquelme mụrụ dị ka ọkpara n’ime ụmụ iri na otu n’ezinụlọ dara ogbenye. Obi ike ya dugara ya n'ịdị ukwuu.
Ọ na-abụkarị onye m họọrọ nke onye na-egwu egwu nke kachasị na bọlbụ ụwa. O meriri ugboro iri na ato nke Argentina na afọ anọ, otu ego dịka akụkọ Diego Maradona mere. O duru ndị otu Argentine iji merie ọla edo Olympic na 4. ”
Paulo Dybala Biography Eziokwu - Ọrụ na Nchịkọta:
Ọ na-egwuri egwu na obere ụlọ egwuregwu na ụlọ akwụkwọ na kọleji tupu ya agaa na 2010 mgbe ọ dị afọ 17 mgbe ọ malitere igwu egwu maka club Argentin Primera B Nacional.
Ọ na-egwuri egwu maka klọb dị ka onye na-eti ihe wee merie ihe mgbaru ọsọ 17 maka ọgbakọ ahụ n'oge mbụ ya. Omume ya malitere na-adọta mmasị site na ndị nkuzi gburugburu Argentina na klọb na Europe. Na 2012, ụlọ ndị Italy, Palermo kpọtụrụ ya.
Dybala hụrụ ohere iji nwekwuo nkà ya wee banye na klọb. Ọ malitere na klọb na 2012 na-atụle ihe nkwado na egwuregwu nke anọ ya maka ụlọ ọrụ ahụ.
Egwuregwu ya na nkà ya dị ezigbo mkpa ka ụlọ ọrụ ahụ nọrọ na ọkara nke otu egwuregwu. N'oge a, klọb ndị ọzọ dị na Europe na-ele ya anya dị ka ndị na-eme mkpọtụ ka ọ na-egosi na ọ bụ ezigbo ọkpụkpọ maka ọgbọ ya.
A na-ewere ya dị ka Messi ọhụrụ dịka ọ si n'otu mba ahụ dị ka onye na-arụ ọrụ anwansi. Ọ nọrọ na ụlọ ịgba chaa chaa maka 3 afọ na 2015 ọ bịanyere aka na ndị Ju na-akpọ Juventus n'etiti ọtụtụ ndị na-etinye aka na ya na ụlọ isi ọ bụla n'ụwa.
Mkpebi ya nwere mmetụta na ọ chọrọ ịnọ na Italytali na Juventus bụ ụlọ ọgbakọ kachasị mma na Italytali nke mere ka uche ya doo anya.
Ejikọtakwara ya na Real Madrid bụ onye dị njikere ịkwụ ụgwọ ụlọ Palermo ihe ruru $ 50 maka ọrụ nke onye ọkpụkpọ mana Dybala mere ka uche ya nọrọ Italytali na ọ bụ ihe o mere.
Erling Haaland Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Mgbe ọpụpụ Pogba, e nyere ya nọmba 10 uwe elu nke Pogba meriri na mbụ mana o kpebiri idebe nọmba 21 ya na ya ma kpọọ ya. Ihe ndi ozo ha kwuru banyere Bio ya bu akuko.
Paulo Dybala Tatoo Aha ya:
Mkpebi igbu egbugbu, ihe osise nke ga-abụ akụkụ nke ahụ gị ruo ụbọchị ọnwụ gị, bụ nnukwu ihe Paulo Dybala kuziri nke ọma.
Ogbugbu Arabic ya nke dị n'akụkụ aka ekpe nke ọgịrịga ya, n'akụkụ obi ya bụ ma eleghị anya ọ kachasị mkpa. Ọ na-akọwapụta aha nne ya, Alice, na leta Arabic. Emere egbu egbu na 25th nke December 2013.
N'ajụjụ ọnụ a na-ebipụta magazin ndị Argentine, a jụrụ Dybala ihe pụtara egbugbu aka ya n'azụ n'aka aka ekpe ya. Nzaghachi ya bụ ..
Emere m ya n'ihi na ọ masịrị m. Otu onye otu otu m nwere ụdị egbugbu ahụ, ọ masịrị m mma ya. O yitere ọla aka ndị Rome oge ochie ji alụ agha, mana emere m ya maka ịchọ mma, karịa maka ihe ọ bụla ọ pụtara. “
Ọ nwere egbugbu nke football na okpueze dị n'ime ụkwụ aka ekpe ya, nke a na-akpọ Noel na Cordoba City.
Paulo Dybala Bio - Ihe mere o ji soro sọks Down:
Paulo Dybala na-akọwa umengwụ, ụdị adịghị mma nke ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ nwere sọks ala nwere. Ewezuga ịkpọ aha ya dị ka onye gburu FC Barcelona, ​​ọ bụ nwa akwụkwọ ọhụụ kachasị ọhụrụ maka ndị egwuregwu na sọks ha dara ọgbọ ya.
Ajụjụ dị ugbu a bụ; Gini mere Paulo Dybala ji eji obere obere pads? Azịza kachasị ewu ewu bụ inweta ike.
Fọdụ n'ime ndị egwuregwu bọọlụ kacha mma n'ụwa agbaala sọks sọks. Ihe atụ gụnyere Rui Costa, Francesco Totti na Thomas Muller.
Ewezuga inye ya ike, o nyekwara ya ikike ịghara ịka nká. Paulo Dybala ka yiri nwata nwoke 17. Ọ ka ga-ele otu afọ ahụ ma ọ bụrụ na ọ gara n'ihu na-eme ka sọks ndị ahụ dị ala.
Paulo Dybala Untold Biography Eziokwu - Ndụ LifeBogger:
Anyị akwadebela ọkwa anyị maka Argentine hitman. Chọta n'okpuru;
Aaron Ramsdale Child Story Plus Ihe Na -adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Oliver Skipp Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Arnaut Danjuma Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Akwụkwọ akụkọ Juve Football
Cristian Romero Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Ndị egwuregwu bọọlụ Italiantali
Ndị egwuregwu bọọlụ United States
Weston McKennie Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ndị egwuregwu bọọlụ Nigeria
Angelo Ogbonna Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Federico Chiesa Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Federico Bernardeschi Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Akụkọ ndụ
Ụmụaka Moise na-akọ akụkọ nke ọma
Mathijs de Ligt nwata Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu